खुल्लामन्च: पर्समा फोटो !
पर्समा फोटो !
तपाईं खुरुक्क हेर्नु त, तपाईंको पर्समा केको-कसको फोटो छ ?
तपाईं जवान/अबिबाहित हुनुहुन्छ भने त अरु कसको फोटो होला र ?
बिबाहित हुनुन्हुन्छ भने चाँही प्राणप्यारी अर्धाङ्गिनी/जीबनसङीनी कै त होला । भाउजुको फोटो छैन भने तपाईंको खैंरियत ठीक छैन, कुनै दिन कुन चाहिंले पोल खोल्देला है, होसियार !
त पूरानो कुरो याद आयो । म र मेरो दाजु बर्षा याममा एक दिन दरौंदी नदीको फांटमा झाटेंको गहुंको नल लिन भनेर तेर्हकिलो बजार हुदैं झर्दै थियौं । ती दाजुका आफ्ना दाजु चाँही काठमान्डौ तिरका जागिरे । यसो दशैमा मेसो पारेर दिएका पैसा रहेछन्, उनिसित । त्यो पैसा सदुपयोग गर्न पैसा हाल्ने एउटा समान (पर्स} किन्ने कुरा निकाले । म सँग जम्मा सात रुपैया थियो, त्यसदिन । तर पर्सलाई १० रुपैया पर्दो रहेछ । मेरा ती दाजुले मलाई ३ रुपैया हालिदिएर सेन्थेटिकको पर्स किनिएछ है गांठे, जिबनमा पहिलो पटक्, त्यो बेला म आठ कक्षामा पढ्दो हुं !
यति त जतन गरेर राखिएन, मेड इन चाइनाको त्यो सेन्थेटिकको माललाई । पैसा हालेर गोजीमा राख्नुपर्ने बिखयलाई पूजा गरेर खोपिमा राखियो । स्कुलमा साथीहरुले बरफ् किन्दा 'पर्स' निकालेको देखेर सीको गर्न खोपी बाट झिकेर खोल्तितिर हालियो । त्यो भित्र पैसा राखेर गोजिमा हाल्न पाए त हुन्थ्यो नि, रित्तै भोकले गोडा दुई चारेक बर्ष आँशु झार्दै रोयो, बिचरो त्यो सेन्थेटिके । सधैं खाली । म त पेट भर्न च्याख्ला र ढिडो खान्थे, तर त्यसले पैसाको चामलको भात कहिल्यै पाएन, बिचरो । सधैं भोको राख्नु पाप ठानेर मैले बरु फोटोको खाजा दिने निधो गरें ।
केही त राख्नु पर्यो, सम्झना र कल्पनामा बुनिएकाहरुको चित्र मनले खिचेर राखियो । त्यतिबेला क्यामरा कसको बाउको पाउनु । पाखामा भलाया टिप्न जांदा तिनका दाजुहरुले मलायाबाट ल्याएका क्यामराले खिचेका फोटाहरु नदेखिनेगरी छिपाएर त्यो पर्समा राखियो । साल काट्न जादा भारीले किच्न लागेको 'साहिलि'को तस्बिर पनि राखिएछ । पछी काठ्मण्डौ आएपछी सेन्थेटिक छाडेर ल्यादरको पर्स बोक्न थालियो । अनी त्यसभित्र राखिने फोटाहरु पनि फेरिन थाले । ती सबै अहीले नै भन्नु पर्ला र भन्या ?
बिदेशतिर त पर्समा कुकुर र बिरालाका फोटाहरु राख्दा रहेछन्, तिनले 'प्रेमी र प्रेमिका' हरुको फोटो नपाएर हो कि त !
नढांटि हेर्नु त तपाईंको पर्समा कसको फोटो छ ?
मेरो मा त मेरै फोटो छ, फोटो राख्ने खालकि अहिले सम्म भेटीएको छैन,
Nepaliko Aawaz said...
सायद फोटो राख्ने खालकि अहिले सम्म नभेटीएरै होला मेरो पर्समा चाही कसैको पनि फोटो छैन छ त केवल १/२ सय रुपियाँ !!!!!!!
हे हे ..रमाईलो लाग्यो .. म नि खोतल्छु है...
umm ... दुइटा ड्राईभर लाईसेन्स, केहि क्रेडिट कार्ड ....केहि बिजनेस कार्ड ... नेपाली एक सय र बिस रुपयाँको नोट ..डलर गोटाका तिनटा नोट...र
रमाईलो टाँसो! मैले पर्स बोक्न थालेको स्नातक शुरु भएपछि हो। त्यहाँभन्दा पहिला त पैसै हुन्थेन, किन चाहिया थ्यो' र पर्स?
मेरोमा पनि केही क्रेडिट कार्ड, ड्राइभर लाइसेन्स, इन्सुरेन्स पेपर , केही डलर समान खरिद गरिएका रिसिटहरू, रु .१ को पुरानो नेपाली नोट आदि मात्र भेटिए |
कुरो राम्रो हो | स्कुले जीवन सबैको उस्तै रहेछ |
रमाईलो कुरो गाँठे! मैले पनि त्यस्तै आठ नौ कक्षामा हुँदा पर्स बोक्न थालेको हुँला । आफ्नो गोजीमा पर्स राख्न के के मात्र तिकडम लगाईएन होला तर मलाई भने गोजीमा भएको पर्स पैसा चाहिएको बेलामा समेत निकाल्न लाज लाग्थ्यो । त्यसबेला फोटो कस्को राखेँ भन्ने चैं सम्झन सकिनं । आजभोली भने आफ्नो परिचय कार्डमा भएको आफ्नै बाहेक अरु कसैको रहेनछ । पर्समा फोटो राख्ने कुरालाई सेलफोनको स्क्रिनले पछाडी पारेजस्तो छ बरु सेलफोनमा भने छोरीको फोटो राखेको छु ।
हे हे, गोकुल जी, पोस्ट खुब रमाइलो लाग्यो .... दिनमा धेरै पटक नजर पर्ने वस्तु हो यो पर्स, त्यसैले तस्विरै राख्न परे आफुले ज्यादा रुचाएको मान्छे या वस्तुकोको राखिनु स्वाभाविकै हो भन्छु म । दिपक जी ले भन्नु भएको पनि ठिक हो, अब यो फोटोको चलन (फेशन) अर्कै कुरातिर सर्दै छ ।
साधारण जस्तो लाग्ने विषयलाई लिएर निकै रमाईलो पोस्ट तयार पार्नु भएछ ।
फोटोकै कुरा गर्ने हो भने मेरो पर्समा त सपरिवार कै फोटो छ है !
हैन गोकुल दाइलाइ पनि के शुर चलेको नि ! अब अरुको पर्स भित्र क- कस्को फोटो र के के हुन्छ हुन्छ नि ! कहा सबै भनेर साध्ये हुन्छर भन्या ! अनि मेरो पर्स भित्र भएको साहिलीको नाम भने भने पल्ला घरे साइलो/ काइलो रिसाउला उसले पनि त्यही साहिली नै पो हेरेर बस्या छ कि ( हाहा ) ...अनि पर्शनल कुरा त सेक्रेट राख्नु पर्यो नि - मानब अधिकारको कुरा पनि पर्यो - तपाई लाइ थाहै होला ... नया नेपाल मा गणतन्त्र आ'छ (??? ..उफ ..)
तर दाइ ले भने पछी - नमान्ने कुरै भएन ... पर्स त हेरे तर कस्को फोटो छ भनिन है ! (कसैको पनि फोटा छैनन् -के भन्नु, भए पो भन्नु ????)
उमेश जी र आवाज जी ले चाही पुरै ... बनाओटि उतार दिनु भयो कि जस्तो लाग्यो (गेस गर्या है ) तर दिलिप जी ले चाही पुरै परिवारै अटाउनु भएको रहेछ ....(सायद - भाउजुको डर ले हो कि ??)
मेरो पर्समा पनि मेरो बाहेक कसैको फोटो छैन ।
गोकुल जी एकदम रमाइलो पोस्ट राख्नुभएछ । तपाइँको पोस्ट पढेपछि त सबैले आफ्नो पर्स हेर्दै आफ्नै पोल पो खोल्न थाले त ।
हाम्रा सौखहरू अरूको देखेर नै बढ्ने रहेछन् हगि । अरूले पर्सबाट पैसा झिकेपछि नै त रहर लागेछ पर्सको ।
के गर्ने आफुसँग त पैसा नै हुँदैन, त्यसैले अहिले सम्म पनि पर्स बिहिनै भएर हिड्ने गरेको छु । आइडी कार्डहरू चाहिँ सर्टको खल्तीमै हुन्छन् ।
तपाईंको अनुभव पढेर आफूले पनि त्यस्तै ६-७ कक्षातिर पढ्दा गोडाएक दश रुपैयाँ हालेर किनेको सेन्थेटिकको पर्स याद आयो। फोटो त म आफ्नै राख्छु पर्समा, त्यो पनि कतै टाँसिहाल्न पर्‍यो भने सजिलो हुन्छ भनेर।